XOG: Mooshin ka socda Garoowe & M/weyne Deni oo codsi u diray guddoonka barlamaanka.
October 9, 2021 Xuseen 0
Puntlandtimes (Garoowe)-Warar hoose oo warbaahintu heshay ayaa sheegaya inuu magaalada Garoowe ka socdo abaabul mooshin lagu burinayo wax-ka beddelkii xeer-hoosaadka ee Baarlamanka Puntland ansixiyay Kal-fadhigii ugu damebeeyey ee ay golaha wakiiladu ku yeesheen Garoowe.
Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Puntland ayaa sheegay in uu soo noqday abaabul hoose oo ku saabsan in Kal-fadhiga soo socda lagu buriyo wax-ka beddelkii Xeer-hoosaadka Baarlamanka.
Dhanka kalena, xildhibaanada qaar ayaa sheegay in madaxweyne Deni uu guddoonka Baarlamanka ka codsaday in hal maalin lagu daro wakhtiga furitaanka Kalfadhiga oo ku beegan 25-ka bishan October 2021, xilligaasi oo ay 3 degmo oo Puntland katirsan ka dhici doonto doorasho dadweyne.
Arrinta muranka badan dhalisay ee waxka bedelka xeer hoosaadka barlamaanka lana ansixiyey kal-fadhigii hore waxa ku jiray qodoba muran dhaliyay oo uu kamid yahay in guddoonka iyo xildhibaannada lagu ridi karo 44 cod.